Abaxhasi bamayeza kunye nefektri-abavelisi bamayeza base China
I-Tris (hydroxymethyl) aminomethane
Inkangeleko: I-crystasl emhlophe umgubo wokucoceka (Ukuhanjiswa): 99.5% min Amanzi: 0.5% max [Fe3 +]: 5ppm max [SO4 2]: 10ppm max [Cl]: 10ppm max Heavy metal: 5ppm max 25kg / drum, 9Mt / FCL Non Izinto ezinobungozi ☑ I-Tris buffer ayisetyenziswanga nje kuphela njengesinyibilikisi se-nucleic acid kunye neeproteni, kodwa ikwanokusetyenziswa okubalulekileyo. I-Tris yayisetyenziselwa ukukhula kweprotein yekristale phantsi kweemeko ezahlukeneyo ze-pH. Low Amandla asezantsi e-ionic e-Tris buffer anokusetyenziselwa ukwenza ifayibha ephakathi ye-lamin kwi-C. elegans. ☑ T ...
Abadibanisi bokudityaniswa kwezinto eziphilayo; Cat I-polyurethane catalyst ye-foam eqinile kunye ne-foam eqinileyo; ☑ Isikhawulezisi se-dicyandiamide okanye iarhente yokunyanga i-anhydride; Ityuwa ye-Dialkylimidazolium inokufunyanwa nge-alkylation ye-1-Methylimidazole. Uhlobo lwetyuwa luhambelana ne-alkylation reagent kunye ne-anion. Uninzi lotywala be-ionic lunokufumaneka ngale mpendulo; I-N-methylimidazole yinto ebalulekileyo ekwenziwayo kokudityaniswa kwamayeza, asetyenziselwa ukulungiselela i-losartan, nitazofenone an ...
2-Methyl resorcinol, I-CAS 608-25-3, CAS 3003-25-2, I-CAS 453-18-9, Ii-Amines, i-C10-C14-tert-alkyl, (R) -3-Aminobutanol,